Odayaal Soomaaliyeed Oo wada-hadallo La Furaya Maleeshiyada Al-Shabaab.
Monday 15th April 2019 08:41:55 in Wararkii Maanta by Xafiiska Burco
Wararka ka imaanaya magaalada Mandheera ee dalka Kenya ayaa sheegaya in odayaal Soomaaliyeed ay kasoo dhaqaaqeen magaalada Mandheera si ay wadahadal ula furaan Al Shabaab Odayaasha oo gaaraya ku dhawaad 10 oday dhaqameed ayaa la sheegay inay usoo talaabeen dhanka xuduuda Soomaliya, iyaga oo doonaya inay wadahadal la furaan Al Shabaab.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay Al Shabaab kala hadlayaan sidii loosii deyn lahaa dhaqaatiir Al Shabaab kasoo afduubteen degmada Madheera ee gobolka Waqooyi Bari.
Wargeys-ka The Star ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa daabacay in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay ku wanaagsan yihiin xalinta xaaladahan oo kale oo aad u adag, iyaga oo sheegay in loo baahan yahay inay xaliyaan xiisadda Afduubka Al Shabaab ay geysteen ka dhalatay.
Dhaqaatiirta u dhashay dalka Cuba ayaa qeyb ka ahaa mashruuc dowladda Kenya ay damacsaneyd oo ah in la is dhaafsado dhaqaatiirta labada dhinac si ay khibrad isku weydaarsadaan.
Ku dhawaad 100 dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba ayaa ku sugan gudaha dalka Kenya, waxaana loo qeybiyay 47 gobol oo ku yaala dalka Kenya Dhinaca kale 50 Dhaqtar oo Kenyaan ah ayaa loo diray Cuba si ay u soo bartaan taqasuska caafimaad oo ka mid ah shaqooyinka ugu baahida badan Kenya.
Ciidamada gaarka ah ee Kenya iyo kuwa Booliska ayaa howlgal lagu baadi goobayo dhaqaatiirtaas ka billaaay gudaha Soomaaliya, waxaana odayaasha doonayaan in xiisadda la xaliyo.
[Deg Deg:-] Ramaax Oo Lagu Kiciyay Dufaano Siyaasadeed Oo Reer Berbera Loo Soo Dhiibay Iyo Odayaal Istaadhay Xaalad Cusu
[Daawo:-] Sheekada Arraweelo, Boqoraddii Soomaaliyeed Ee Sinnaanta Jinsiga Dhaqan Gelisay 2 Kun Oo Sano Ka Hor
[Xaasaasi]:- Dhalinyaro Iyo Odayaal Somaliland U Dhashay Oo Hargeysa Ku Faafinaya Diinta Kirismiska Iyo Aamusnaanta Xuku
In rag waaweyni gabayo iyo heeso ku ammaanaan marwo nin kale qabo waa wax dhaqanka Soomaaliyeed ku cusub oo aniga yaxyax